के हो युरिक एसिड ? यस्ता छन् बच्ने उपायहरु ! - Daily Lokmandu
Homeस्वास्थ्य/जिबनशैलीके हो युरिक एसिड ? यस्ता छन् बच्ने उपायहरु !
के हो युरिक एसिड ? यस्ता छन् बच्ने उपायहरु !
August 27, 2018 स्वास्थ्य/जिबनशैली Comments Off on के हो युरिक एसिड ? यस्ता छन् बच्ने उपायहरु !
काठमाडौं । युरिक एसिडको मात्रा चाहिनेभन्दा बढी भएमा यसले जोर्नीहरुमा समस्या ल्याउँछ र ‘गाउट’ भन्ने रोग लाग्छ । युरिक एसिडलाई एक प्रकारको बाथरोगका रुपमा बुझ्न सकिन्छ। युरिक एसिड रगतमा नभई नहुने महत्वपूर्ण तत्व हो ।
यसले शरीरमा ‘एन्टी अक्सिडेन्ट’को काम गर्छ । यसले जोर्नीहरुमा अत्याधिक दुखाइ गराउँछ। रगतमा युरिक एसिड बन्ने र युरिक एसिड पिसाबबाट बाहिर निस्किने प्रक्रियामा गडबडी भयो भने रगतमा पर्याप्त मात्रामा युरिक एसिड घुल्न पाउँदैन र विस्तारै गाउटको रुप लिन्छ। एउटा स्वस्थ मानिसमा युरिक एसिडको मात्रा ६ दशमलब ८ एमजी रडिएल हुनुपर्छ।
युरिक एसिड बढी देखिए पनि जोर्नीको दुखार्इ नहुन सक्छ। यस्ता व्यक्तिलाई गाउट नभएर ‘हाइपरयुरेसिमिया’ भएको हुन सक्छ । त्यसले जोर्नीमा असर गर्दैन। जसलाई युरिक एसिड भएकै कारण जोर्नी (खुट्टाको बुढी औँला र आसपास) मा दुख्छ, त्यो गाउट हो भनेर बुझ्नुपर्छ। युरिक एसिडबाट हुने बाथरोग नै गाउट हो । यो वंशाणुगत समस्या पनि हुन्छ ।
युरिक एसिड कसरी हुन्छ ?
युरिक एसिड पहिलो पटक खुट्टाको बुढी औँला र त्यसको आसपासको जोर्नीहरुबाट दुख्न सुरु हुन्छ । यसलाई ‘मेटाटार्सल जोइन्ट’ भनिन्छ । प्रायः राति सुतेको बेला जोर्नीहरु अत्याधिक दुख्ने गर्छ र बिहान उठ्दा सुन्निएको हुन्छ ।
सुरुसुरुमा खुट्टाको बुढी औँलामा मात्र हुने दुखाइ समयमा उपचार नहुँदा अन्य ठूला जोर्नीहरुमा पनि सर्न थाल्छ । युरिक एसिड भएको थाहा नपाएकाहरुलाई रातो मासुको अधिक प्रयोग र मध्यपान सेवन गर्दा एक्कासी बुढी औँलाको जोर्नी सुन्निने र दुख्ने समस्या आउँछ।
बच्ने उपाय :
नियमित व्यायम गर्ने
पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने। तर, मुटुका बिरामीले भने पानीको मात्रा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार पिउनुपर्छ
धूमपान र मध्यपानबाट टाढै बस्ने
प्युरिन तत्व बढी हुने रातो मासु, गेडागुडी, गालेको अचार, फुलगोभी, च्याउ, पालुङ्गोको सेवन कम गर्ने
गुलियो पदार्थ वा यस्ता अन्य पेय पदार्थको प्रयोग कम गर्ने
शरीरको वजन घटाउने
नियमित औषधिको प्रयोग गर्ने
समय समयमा चिकित्सकको परामर्श लिने
खुट्टाको बुढी औँला र आसपासका जोर्नीहरु सुन्निनु
जोर्नी राति बढी दुख्नु
दुखाइ सहनै नसक्ने हुनु
लामो सयम युरिक एसिडको समस्या भएकालाई घुँडा, कुइनो लगायतका जोर्नीहरुमा पनि दुख्नु।
ज्वरो आउनु, आदि
सिराहा मा दुखद घटना : आफ्नै छोरा काल बनेर आएपछी 45 बर्ष को उमेरमै उमेश बिते …
खाली पेटमा लगातार ४ दिनसम्म किसमिसको झोल पिउनुस्, आफै देख्नुहुनेछ चमत्कार:पूरा पढ्नु होस ।
३ करोड नेपालीलाई खुशिको खबर : नेपाल विश्वकै सुन्दर देशको पहिलो स्थानमा, भारत सूचीमै परेन (फोटो फिचर) (20)
जग्गा नापमान सम्बन्धि अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी तपाईंलाई छ ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस (20)
यसरी पकाउनुस फर्सिको मुन्टाको तरकारी तपाईंले सधै बनाएको भन्दा सयौं गुना मिठो हुन्छ (17)
क्यान्सर रोगिको लागि खुशीको खवर ! घरमै बसेर जम्मा १६ रुपैयामा यसरी गर्नुस् उपचार (17)
अस्पतालमा भयो धुमधामले विवाह, विदाईपछि श्मशानघाट पुगिन् बेहुली (14)
इच्छा तपाईकोः छोरा जन्माउने की छोरी ? यस्ताे छ १०० % काम गर्ने चाइनिज सुत्र (14)
नेपाली सेनामा खुल्यो ठूलो संख्यामा जागिर, खाने होइन त ? आबेदन दिनुहोस | (13)
कम्तीमा पचास जनालाई शेयर गरि आफु पनि स्वास्थ्य वनौ र अरूलाई पनि स्वास्थ्य बन्न प्रेरित गरौ,… (12)